A Glimpse of My Life: နားထောင်မိသော သီချင်းများ
သီချင်းမကြိုက်တဲ့သူ တော်တော်ရှားမယ်လို့ ထင်တယ်။ ကျွန်မတော့ သီချင်းနားထောင်ရတာ တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ အခုတစ်လော ဘာသီချင်းတွေ နားထောင်ဖြစ်လဲဆိုတော့ ၆တန်းနှစ်တုန်းက နာမည်ကြီးတဲ့ သီချင်းလေးတွေ ရှာနားထောင်ဖြစ်တယ်။
ကျွန်မ ၅တန်း၊ ၆တန်းနှစ်မှာ အမေရိကားရောက်နေတော့ အမေရိကန်ကျောင်းပဲ တက်ဖြစ်ပါတယ်။ တက်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းကလည်း လူမည်းတွေများတဲ့ ကျောင်းဆိုတော့ သူတို့နားထောင်နေတာမျိုး၊ သူတို့ သဘောကျကျတဲ့ သီချင်းမျိုးတွေ လိုက်နားထောင်ရင်း သဘောကျသွားတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက ရပ်ပ် / ဟစ်ပ်ဟော့ပ် တွေ သိပ်နားထောင်ဖြစ်တယ်။ ရေဒီယိုလိုင်း (၂)လိုင်း (Kiss FM နဲ့ WPGC လား မသိဘူး မေ့သွားပြီ) ကို နားထောင်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းလေးတွေဆို အသံသွင်းထားတယ်။ အဲ့ဒီ အသံသွင်းထားတဲ့ အခွေ အခုထက်ထိ ရှိသေးတယ်။
အဲ့ဒီခေတ်တုန်းက ကိုယ်က မုန့်ဖိုးမရတော့ အခွေတွေ ၀ယ်မနားထောင်နိုင်ဘူးလေ... ဒီတော့ ရေဒီယိုကလာတဲ့ သီချင်းတွေပဲ နားထောင်ဖြစ်တာပေါ့... အခု အဲ့ဒီ ရေဒီယိုက နားထောင်ပြီး ကြိုက်ခဲ့ဖူးတဲ့ သီချင်းတွေကို mp3 လိုက်ရှာပြီး နားထောင်ဖြစ်နေတယ်။ တစ်ချို့ဟာတွေက ရှာရခက်တယ်.. ဖော်ရမ်မှာ အကူအညီတောင်းပြီး ရှာခိုင်းလိုက်တာ တင်ပေးကြတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ သီချင်းလေးကို ရလိုက်တာ တော်တော်ပျော်သွားတယ်။ ရေဒီယိုက အသံသွင်းခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေပဲ collection အနေနဲ့ လိုက်စုနေတာ။
အခု လက်ရှိ အောက်က သီချင်းနာမည်လေးတွေ လက်ဝယ် ရှိတယ်။ သဘောကျရင် ဒေါင်းလုပ်လုပ် နားထောင်ကြပေါ့...
Bone Thugz N Harmony - Crossroad
2Pac - California (California!!! This song is da bomb! (um.. forgot that I'm supposed to write in Burmese :P)
Mc Lyte - Keep On Keepin' On
ဒါတောင် နည်းနည်းကျန်ဦးမယ်ထင်တယ်။ အိမ်က အသံသွင်းထားတဲ့အခွေကို ပြန်မကြည့်ရသေးဘူး... မှတ်မိသလောက် လိုက်ရှာထားတာ :P
ဒါတောင် ၅တန်း၊ ၆တန်းတုန်းက သီချင်းတွေပဲ ရှိသေးတာနော်။ နောက်ကျမှ ရတန်း-၉တန်းမှာ နားထောင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေဆိုပြီး တင်ဦးမယ်.. ဟိဟိ
အခ်ိန္ 5/19/2009 12:38:00 PM စာေရးသူ - အရုဏ်ဦး